Biko mara na ebe iji nkwenye gị maka nhazi ozi nkeonwe gị ị nwere ike iwepu nkwenye gị, dịka ọmụmaatụ site na izipu ozi ịntanetị na nkwado@aromaeasy.com n'oge ọ bụla nke ndọrọ ego agaghị emetụta iwu nke nhazi ọ bụla emeburu na ndabere nke nkwenye gị.
Ị nwere ike zitere anyị ozi email na support@aromaeasy.com iji gosipụta ikike gị. Anyị ga -aza arịrịọ gị n'oge kwesịrị ekwesị. Anyị ga -eme ihe niile ezi uche dị na ya iji hụ na data nkeonwe gị ziri ezi yana ọfụma.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ, ị nwere ike họrọ ka kọmputa gị dọọ gị aka na ntị oge ọ bụla ezigara kuki, ma ọ bụ ị nwere ike họrọ gbanyụọ kuki gị niile site na mwube ihe nchọgharị gị. Dị ka ọtụtụ weebụsaịtị, ọ bụrụ na ihichapụ kuki gị, ụfọdụ ọrụ anyị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma. Agbanyeghị, ị ka nwere ike itinye iwu site na ịkpọtụrụ Ọrụ Ahịa na nkwado@aormaeasy.com.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ igosipụta otu ikike gị dị ka akọwara n’elu, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ mkpesa gbasara iwu a, otu esi ahazi ozi nkeonwe gị, biko kpọtụrụ anyị site na e-mail: support@aromaeasy.com.